Ebe kacha mma obibi
site na-ede akwụkwọ: Max Csern Ọnwa Ise 9, 2021
Kedu otu esi achọpụta ebe kachasị mma ibi na mbara ụwa? - site na ahụmịhe nke m, site na enyemaka nke nzaghachi sitere na ndị ọzọ cosmopolitans na ụlọ ọrụ pụrụ iche.
Kwa afọ, ọtụtụ puku mmadụ na-enubata na mba ndị ọzọ ịchọ ndụ ka mma. Nke a bụ n'ihi ọchịchọ ịbawanye ọdịmma ha ma nye ụmụaka ezigbo ọdịnihu. Mgbe ụfọdụ ihe kpatara ya bụ na ọ bụ ọchịchọ nke ndị si mba ọzọ na-ahọrọ otu mba ma ọ bụ ọzọ dabere na mmasị na mmasị ha. Na, n’ezie, otu n’ime ihe kpatara ya bụ ọlụlụ di na nwunye, ịmụ akwụkwọ na ịrụ ọrụ. Esi chọpụta ebe kacha mma ibi Thewa? - site na ahụmịhe nke m, site na enyemaka nke nzaghachi sitere na ndị ọzọ cosmopolitans na ụlọ ọrụ pụrụ iche.
Companylọ ọrụ na-agba izu na Resonanse Consultancy gosipụtara ọhaneze nyocha nyocha na nyocha obodo kacha mma ibi na 2021. Ndepụta a gụnyere ndị ahọpụtara nwere ọnọdụ obibi na ọnọdụ ọrụ dị mma.
Nhọrọ nhọrọ maka megacities kachasị mma maka ndụ gụnyere isi ihe ndị a:
Ọnọdụ ala na ọnọdụ epidemiological (ọnọdụ ihu igwe, nchekwa, ọnụọgụ ndị nwere coronavirus).
Uche nke ndị bi n’obodo ahụ: omenaala, akparamagwa n’ebe ndị si mba ọzọ kwabata nọ, yana ọnụ ọgụgụ ndị gụrụ akwụkwọ na mahadum.
Ọnụnọ nke akụrụngwa mepere emepe (ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ihe nkiri, ámá egwuregwu, mahadum, wdg).
Kpụrụ obibi: enweghị ọrụ, ego nke ndị mmadụ, nnukwu ngwaahịa obodo (ngwaahịa ndị mepere emepe).
Ohere ọdịbendị na nke ntụrụndụ: ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ cafụ ,ụ, ụlọ oriri na nkwari abalị, wdg.
Ugboro nke ọchụchọ na engines ọchụchọ, nyocha njem na hashtags na netwọk mmekọrịta.
Ndị kasị ewu ewu, na-ewere ebe nsọpụrụ atọ mbụ, nọ na UK - London, na USA - New York na France - Paris. Iri iri gụnyere megalopolise na Europe, Asia na United States.
Top 10 nke Resonanse Consultancy:
London, Great Britain). "Foggy Albion" na - ejide ọnọdụ ndị isi n'ọkwa maka afọ 6 n'usoro: obodo kacha mma ibi. London dị na 16th maka ọnụnọ nke ebe ndụ akwụkwọ ndụ maka ntụrụndụ: ogige ntụrụndụ mara mma, ụlọ ochie ndị na-achụ nta ndị eze, wdg. Ọrịa Covid emeela mgbanwe nke aka ya n'ụzọ nke obodo ochie ahụ: ndị bi na ya malitere ịba uru karịa ihe ha nwere. Ma ka o sina dị, ọdịiche dị n’etiti ndị ọgaranya na ndị ogbenye na-eto n’ụzọ dị egwu.
New York, USA). Otu n'ime obodo ukwu kachasị ukwuu n'ụwa niile n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic. Obodo skyscrapers na ikike nke nnwere onwe nke America. Ebe kachasị amasị ọtụtụ ndị njem na ndị si na mbara ụwa niile - "American Dream" n'eziokwu. Obodo Russia, nke biri ebe a kemgbe afọ 70 nke narị afọ gara aga ma na-eduga ụzọ ndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-ejupụta kwa afọ na ndị bịara ọhụrụ maka obibi ebighebi. N'agbanyeghi onodu oria ojoo ojoo na America ugbu a, onodu ibi ndu di elu. Dabere na atụmatụ, na March 2021, ụgwọ ọnwa ndị America fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 5000 (ihe dị ka 300000 rubles).
Paris, France). Iji kọwaa nkebi ahịrịokwu a ma ama: "Hụ Paris ma nwụọ", ọtụtụ ndị njem nleta na-eji obi ike kwuo, sị: "Hụ ma nọrọ." Mwakpo ndị na-eyi ọha egwu emebisịghị isi obodo France: ọ gbakere ma nwee ọfụma ma bụrụ maka ọtụtụ obodo kacha mma ibi. Paris họọrọ 5 nke usoro nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na 7th na ebe nke ofufe maka njem nleta. Site na ikike ndị ikike igwu mmiri na Seine, ndị Parisi n'onwe ha achọghị ịhapụ Paris maka oge ọkọchị.
Moscow, Russia). Isi obodo Russia bụ nri dị ụtọ nke ndị ala ọzọ. Ha nwere afọ ojuju ma obibi ndụ na ụgwọ ọnwa. Ha na-ahụ nkwukọrịta n'ụzọ dị mfe ma nabata ha na ọha mmadụ Russia. Moscow bụ isi obodo ọtụtụ mba, nwere akụrụngwa mepere emepe, ebe ndị mara mma maka ntụrụndụ, akụkọ mgbe ochie na ọtụtụ ebe nkiri. Maka ọtụtụ ndị ala ọzọ, ọ obodo kacha mma n'ụwa. Asọmpi bọọlụ bọọlụ nke afọ 2018 tụrụ ụwa niile n'anya etu o siri dị ya, mepee Russia dị iche maka ọtụtụ ndị bi na mba ahụ wee nwekwuo mmasị na ọdịbendị obodo ahụ. Ọzọkwa, ụzọ ụgbọ oloko a rụzigharịrị enweghị ike ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ - mpako ụlọ nke nwere ike ịsọ mpi na mpaghara ọdịda anyanwụ.
Tokyo, Japan). A na-ahụta obodo ọdịnihu, n'agbanyeghị oke ọdachi ndị na-emere onwe ha na-eme na ya, bụ otu n'ime nchekwa kachasị mma. Tokyo bụ nke atọ n'ọchịchị ụwa nke obodo maka ịba ọgaranya: 11th na ọnụ ọgụgụ ndị na-enweghị ọrụ, ntọala ọla ọcha na ọnụ ọgụgụ nke isi ụlọ ọrụ Global 500, yana nke abụọ na ụlọ nri. Tokyo nwere mmasị na mmemme nri na ọdịbendị ya.
Dubai, UAE). Okomoko ndi Arabia n’etiti aja aja ocha na Osimiri Peasia nke Indian Ocean. International Business na Tourism Center - Dubai. Obodo nke ọdịnala ọwụwa anyanwụ nwere njikọ chiri anya na njedebe. N'ihi ọrịa coronavirus, ọnya ndị njem na-ebelata nke ukwuu. Eziokwu a metụtara akụ na ụba mba ahụ, mana ọ bụghị oke nkatọ. Dubai na-aga n'ihu ebe kacha mma obibi maka ọtụtụ ndị kwabatara.
Singapore. Obodo agwaetiti Eshia-megalopolis enwetawo nnukwu ọganiihu n'ime afọ 50 - site na polis dara ogbenye na enweghị mmepe, ọ tụgharịrị gaa ike ọwụwa anyanwụ. Onye ama ama maka ọdụ ụgbọ elu ya na, ma, mmiri ozuzo mmiri ozuzo, oke mmiri mmiri kacha elu n'ụwa.
Barcelona, ​​Spain). Ihe owuwu ihe owuwu, ihe okike na nke isi obodo Catalan bụ ihe ndọta maka ndị njem dị ka oge ọrịa na-efe efe na-aga n'oge ihe isi ike. Ọtụtụ Ogwe, ndị mechibidoro ọtụtụ ụsọ mmiri n'ihi enweghị ndị ọbịa, enweghị ike imeghe.
Los Angeles, USA). Ndị njem nleta na ndị na-eme nri na-eri nri nke obodo nke ndị mmụọ ozi ji nwayọ na-amalite ịmara onwe ya mgbe Covid-19 gachara, mana nke a anaghị egbochi ya ịhapụ otu n'ime ezigbo megacities n'ụwa.
Madrid, Spain). Isi obodo Spanish bụ onye ọhụụ na iri kachasị elu, mana ọ dịla anya ihe ị ga-ahụ maka ndị njem nleta. Akụ na ụba obodo etolitegoro ma ọ kwụsịghị ịgbalịsi ike maka ọganihu. Obodo nwere ihu igwe mara mma maka ahụike, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihu igwe dị mma, nke bụ ozi ọma maka ndị ọbịa. Ndụ abalị na-agbake mgbe ọrịa ahụ gbasasịrị (ebe 6th na ọnụego maka ntụrụndụ), atụmatụ obodo mepere emepe na-aga n'ihu.
Ile ọbịa na akparamàgwà ndị kwagara mba ọzọ
Kedu ebe kacha mma ibi ndị njem nleta na ndị chọrọ ịnọ na-adịgide adịgide? N’ọtụtụ mba, ha gosipụtara omume enyi n’ebe ndị ọbịa nọ ma bịarute maka obibi ebighebi. Tupu ọrịa a agbasa, obodo ndị a gụnyere: Alicante, Malaga, Lisbon, Valencia, Buenos Aires na ndị ọzọ. Onye kwesiri ntukwasi obi dika ọkwa Expat Insider nke 2020 bụ mpaghara Iberian.
Spanish Alicante na Portuguese Lisbon dị ezigbo enyi: ndị ọbịa nwere afọ ojuju maka ibi ndụ, ntụrụndụ ọdịnala yana ikike ịmụ asụsụ ahụ ngwa ngwa.
Vingkwaga mba ọzọ na-esikarị ike mgbe ụfọdụ: ndị ọchịchị mba dị iche iche na-emeso ndị na-agagharị gburugburu ụwa na-achọsi ike obodo kacha mma ibi. Ọ na-adịkarị mkpa inwe ezigbo ihe kpatara ịkwaga: ịlụ di ma ọ bụ nwunye, ọrụ, ma ọ bụ ọnụnọ nke isi obodo.
Ohere inweta ikike obibi ma ọ bụ bụrụ nwa amaala na-abawanye n'etiti ndị na-etinye ego. Iji sonye na mmemme nke itinye ego na ego, ha na-atụnye ego ole na ole na mmepe akụ na ụba nke steeti ha ga-edozi. Ndị mba ọzọ kwabatara nwere ike imeghe azụmahịa, zụta ụlọ / ụlọ ma ọ bụ tinye ego.
Mmemme itinye ego na-arụsi ọrụ ike na Spain, Portugal, Greece. America nwekwara obi ụtọ ịnye ụmụ amaala nwere nchekwa ego nke mba ndị ọzọ dị njikere itinye ego na ya. Onye kwuputara maka ebe obibi nwere ike ịkwaga maka obibi ebighi ebi n'obodo ukwu nke mba ọzọ site na nnukwu ego na mba nnabata.
Nkasi obi na ịdị ọcha
Vienna nọ na 32nd nke iri kachasị elu, a na-ewere ya dị ka otu n'ime ihe kachasị ebe kacha mma ibi ọ bụghị na ndapụta. Nke a bụ a nnọọ mma mara mma obodo na a akụkọ ihe mere eme ihu, mepere akụ na ụba, ụkpụrụ ụlọ ncheta, na omenala. N'ime akụrụngwa mepere emepe nke obodo, ekenyela ebe dị mkpa maka ebe ntụrụndụ na-acha akwụkwọ ndụ, ogige, ụlọ kọfị. Ndị bi na Vienna bụ ndị nwere mmasị n'ụgbọ njem ọhaneze, yabụ ha anaghị agagharị n'ụgbọala ndị ọzọ, si otú ahụ na-echekwa ịdị ọcha nke n'okporo ámá na ikuku dị ọcha ruo n'ókè ka ukwuu. A nabatara Vienna na 2021 obodo kacha mma obibi n'usoro ọmụmụ.
Austria jiri obi ya kwere ịhapụ ndị kwabatara iji dozie nsogbu nke ego a nke ikpeazụ. Ọzọkwa, a chọghị itinye ego ego, mana achọrọ ndị nnabata maka ikike obibi ma ọ bụ ụmụ amaala iji nye ihe akaebe nke ikike ego ha. Ihe a choro sitere n’onodu ozo: ino n’ime obodo ihe dika onwa isii n’aho.
Ọkwa na ogo ndụ
Zurich bụ ụlọ akụ na ụba na obodo kachasị ukwuu na Switzerland (n'agbanyeghị obere ọnụọgụ ya - mmadụ 428) ọ nwere 000th na ogo 36 kacha elu. Dika otutu ndi kwabatara obodo kacha mma n'ụwa n'ihe gbasara ọdịmma na ọganihu. Mma, ejikere nke ọma, bourgeois nwere ọgụgụ isi ma dịkwa ka azụmahịa, Zurich na-adọta obere akpa si n'akụkụ ụwa niile. Ozo nke oma diri ndu na azumahia. Ọnụ ọgụgụ nke ụmụ amaala na-enweghị ọrụ nwere 9th. Obodo dị n’elu iri nke Global 500.
Switzerland na-akpọ ndị ọgaranya na ndị nnabata onwe ha maka obibi ebighebi, mana n'ọnọdụ ịkwụ ụtụ isi kwa afọ nke 450000 franc. Iji nweta ikike obibi, ị ga-ebiri na Zurich ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 200 n'otu afọ - nke a bụ ihe dị mkpa ndị ọchịchị Switzerland chọrọ.
Maka otutu obodo kacha mma maka ibi ndu na azụmaahịa bụ United States of America. Dabere na Startup Genome, New York, San Francisco na London so na ndepụta nke obodo ndị kachasị asọpụrụ maka ịmepụta mmalite.
Obi nke America jidesiri ike nke abụọ na ndepụta nke ọtụtụ, ọ bụghị naanị n'ihe gbasara mmemme ọdịnala na ebe etiti, kamakwa na nyocha ọrụ na ntinye ụdị echiche azụmaahịa niile. New York nọ n'ọnọdụ nke anọ nke ọnụọgụ nke Offlọ Ọrụ Global.
San Francisco mere ndepụta a n'ihi ọnụnọ nke mpaghara mpaghara nke ụlọ ọrụ teknụzụ - Silicon Valley. Obodo a bụ ebe ọtụtụ ndị maara ihe nwere agụmakwụkwọ mahadum, pasent nke ndị ala ọzọ n'etiti ha buru ibu. Kedu obodo ka mma ibi - New York ma ọ bụ San Francisco - onye ọ bụla na-ekpebi onwe ya, mana ihe ndị ụlọ ọrụ Mbugharị US chọrọ bụ otu maka onye ọ bụla.
Iji tozuo ibi na America, ndị kwabatara ga-enwerịrị visa: EB5 (yana ego nke $ 900000) ma ọ bụ E2 ($ 100000). EB5 na-eburu ego ntinye ego, nke odighi mkpa isonye na oru nke ulo oru. E2 pụtara ịmepe azụmahịa na United States. Naanị nhọrọ mbụ dịịrị ndị Russia, nke na-adịchaghị mma ma baa uru maka ọtụtụ ihe kpatara na ha ga-echere afọ 2 ọzọ. Na mgbakwunye, ego ahụ dị oke ukwuu. Mana ị nwere ike ịga n'ụzọ ọzọ: buru ụzọ nweta ụmụ amaala nke Grenada (obodo nke ejirila nkwekọrịta banye na ndị America), ebe ị na-akwụ $ 15000 maka paspọtụ. Mgbe nke ahụ gasị, tinye akwụkwọ maka visa E2 America. Iji tinye akwụkwọ maka nwa amaala nke Grenada na E2 na United States, ha na-etinye ego 250000%.
London ejiriwo ọnọdụ ndu n'ọnọdụ ụkpụrụ ndụ ndụ na eserese ụwa nke nde-tinyere obodo ọtụtụ afọ. Nnukwu ego nke ndị mmadụ, ọnụnọ nke akụrụngwa mepụtara: ihe owuwu ihe owuwu ụlọ, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mma n'ụwa, mahadum, wdg na-enyere ya aka ịbụ onye mbụ. United Kingdom nyere akwụkwọ ikike - visa ndị ọchụnta ego maka afọ atọ nye ndị ala ọzọ bara ọgaranya chọrọ ịchụ ego karịrị nde abụọ na-eto eto na mmepe nke steeti na-asụ Bekee. Ndị bara ọgaranya na-akwaga, mgbe enyemaka UK, nwere ike ibi, rụọ ọrụ ma mụọ na ya.
Obodo kacha mma n’ụwa Enwere ike ịtụle Lisbon ebe ezumike. Ọ bụ obodo kasị ochie na nke kachasị ukwuu n’ụwa, Western Europe na ọdụ ụgbọ mmiri Portugal. N'ihi ihu igwe dị na Mediterenian dị mma, Lisbon nwere oge oyi Europe kacha ekpo ọkụ na ọtụtụ ụbọchị anwụ na-acha n'afọ. Ọ bụ ebe ezumike na nchekwa obodo nke ọnụọgụ karịrị 500 puku mmadụ. Portugal - obodo kacha mma ibi maka ndị hụrụ ihu igwe na-ekpo ọkụ na oghere mmiri: Atlantic Ocean dị nso. Na 2020, e kenyere mba ndịda nọmba mbụ na njem Europe.
Ndị Cosmopolitans nweta ikike obibi na Portugal yana enyemaka nke itinye ego: opekata mpe 250000 euro. Omume a ma ama n'etiti ndị chọrọ ịkwaga maka ebe obibi ebighi ebi bụ inweta ụlọ: ụlọ ma ọ bụ ụlọ site na 900000 euro.
Na ogo nke nri obodo kachasị atọ ụtọ, London na-abụkarị ndị mbụ, yana ihe karịrị ụlọ nri iri asaa na iri na Michelin. Cullọ nri ndị na-eri nri London na-enye ndị ọbịa ha na ndị bi na nri nri, azụ, akwụkwọ nri. Isi obodo England na-aga n'ihu obodo kacha mma ibi na omenala na nri.
Enweghị ike ileghara ụlọ ọrụ gastronomic dị ka Tokyo (5th na ndepụta Resonanse). 230 ụlọ oriri na ọ restaurantsụ areụ bụ Michelin kpakpando. Ọtụtụ narị nri dị ụtọ dị iche iche na ọtụtụ ihe okike na-eju ndị njem nleta anya na ụtọ ha pụrụ iche. Chahan, imoni, wagashi, sushi - mee gourmets ka ha nwee ịhụnanya wee nọrọ n'obodo Japan iji nwee ike ịnụ ụtọ nri ndị Japan.
O siri ezigbo ike inweta akwụkwọ ikike obibi na Japan, ebe ọ bụ obere mba mechiri emechi nke nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu. Nwere ike ịnweta paspọtụ Japanese n'okpuru ọnọdụ ndị a:
alụmdi na nwunye iwu na nwa amaala Japan / nwa amaala;
obibi ma ọ dịkarịa ala afọ 5 n'ókèala nke steeti (ihe achọrọ maka ndị niile na-achọ akwụkwọ).
ezigbo iwu nke ndị Japan e kwuru ma ede ede;
na-eme ihe omume gọọmentị na Japan, n'okpuru ọkachamara dị elu nke onye ọrụ;
onye nyocha ga-enwerịrị ego ma ọ dịkarịa ala $ 25000.
Nwere ike ime ka ndị ọchịchị Japan kwenye inye ha ikike obibi ma ọ bụrụ na itinye ego $ 50000 na isi obodo nke ọwụwa anyanwụ. Iji mee nke a, ha na-emepe azụmahịa nke ha, nke ha na-akwado ma na-emepe oge niile, na-enye ndị obodo ahụ ọrụ. N'otu oge, olu nke itinye ego ga-abawanye mgbe niile.
Tokyo ga-abụ obodo kacha mma n'ụwa maka obibi ebighi ebi, ọ bụrụ na ị na-agbaso ihe niile achọrọ, sọpụrụ obodo na omenala ya wee nye onyinye zuru oke na akụ na ụba ya.
Zụta ala na ụlọ na-aba uru na ebe ndị ahụ kedụ ebe kachasị mma ibi, dịka ọmụmaatụ - na Barcelona. Ọ bụ obodo Spen na mpaghara Mediterenian nwere ụlọ ọrụ na azụmaahịa mepere emepe, yana ebe dị mkpa nke ụzọ ndị njem. Ebe a mara mma kwa afọ tupu ọrịa a adọta ọtụtụ puku ndị njem nleta, na n'oge ntiwapụ ahụ, emechiri ya maka ịnweta, nke na-enweghị ike imetụta akụ na ụba Portuguese, na ọkachasị ahịa ahịa. O kwere omume ịzụta ụlọ na Spain na mbelata 30%, ọnụ ahịa kwa mita anọ site na njedebe nke 2020 ruru euro 1391. Mgbe ndị njem nleta laghachiri na Barcelona, ​​ọnụahịa ga-arị elu. Ndị na-etinye ego na ala na ụlọ ugbu a nwere ike ịnweta ego site na mgbazinye ma ọ bụ ọrịre mgbe emepere oke ala.
Barcelona nwekwara mmemme itinye ego maka ndị cosmopolitans: onyinye maka ego obodo ga-eru euro 500000.
Otu n'ime ebe kacha mma ibi n'ọdịnihu nwere ike ịghọ Atens. Ha dị na 29th ebe ndepụta megacities bara uru. Isi obodo Gris bụ obodo ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme na akụ na ụba nwere ọnọdụ ihu igwe dị mma maka ndụ. Ọnụ obibi obibi na ya dị obere karịa ma e jiri ya tụnyere obodo ndị ọzọ akpọrọ, nke na-enweghị ike ịmasị ndị njem nleta. Ike isi obodo Greek na-eto kwa afọ, ebe gọọmentị ya na-etinye aka na mgbanwe mgbanwe akụ na ụba, nke bụ isi ya bụ ọgụ megide nrụrụ aka.
Ndị chọrọ ịbịa Atens ibi ndụ ga-etinyerịrị na ya site na euro 250000.
Kedu obodo ka mma ibi - onye ahụ n’onwe ya kpebiri. Ọ na - eme na ịga leta obodo ukwu, onye njem nleta hụrụ ya n'anya nke ukwuu nke na ọ na - atụ anya ịkwaga n'oge. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji mejuputa atụmatụ anyị, mana anyị ga-echeta na mbugharị na mba ọzọ anaghị eme na-enweghị mmegharị na nrụgide, yana ọ gaghị ekwe omume na-enweghị onyinye ego.
↑ ebe kacha mma ibi ↑ mba kacha mma ibi ↑ olee mba ka mma ibi ↑ olee obodo ka mma ibi ↑ mba kachasị mma n'ụwa ↑ obodo kacha mma n'ụwa ↑ obodo kacha mma ibi ↑ obodo kacha mma ibi ↑ kedụ ebe kachasị mma ibi ↑ Mba nke Obibi ↑ obodo ibi ↑ obodo ikike obibi ↑ na-adịgide adịgide obibi mba ↑ n'ihi na-adịgide adịgide obibi ↑ hapụ mba ↑